Muxuu ku saleysnaa kulanka Farmaajo iyo Rex Tillerson ee khadka teleefanka? – Balcad.com Teyteyleey
Muqdisho (Caasimada Online) – Rex Tillerson oo ah Xogahaya Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa ka hadlay sida ay dowladiisa u garabtaagan tahay dowlada Somalia.
Rex Tillerson, oo ka hadlaayay arrinta Somalia ayaa sheegay in Maraykanka ay ka go’antahay in DFS ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay higsanayso.
Waxa uu sheegay in si dhow ay kala shaqeyn doonto dadaallada ay DFS ku cirib tireyso Kooxaha argagaxisada oo ay ugu horeyso Shabaab.
Rex Tillerson, ayaa sheegay in mar ay khadka teleefanka kuwada hadleen Maxamed C/llahi Farmaajo Madxaweynaha Somalia, ayuu tilmaamay inuu u cadeeyay in dowlada Mareykanka ay ka go’an tahay inay is garabtaagto Somalia.
Rex Tillerson, waxa uu Madaxweyne Farmaajo u xaqiijiyay in si buuxda ay u taageerayan dadaallada nabadda iyo xasilloonida Somalia.
Nuqul kamid ah haddalka Rex Tillerson, ayaa ahaa ”Waxaan ahmiyada koowaad siineynaa Somalia oo heshaa nabadgalyo buuxda, waxaan xooga saareynaa sugidda nabadgalyada iyo xaqiijinta in hay’adaheenna ammaanka ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh”
Rex Tillerson, waxa uu Madaxweynaha u ballanqaaday in dowlada Mareykanka ay ka saacidi doonto sida Amniga, La-dagaalanka Shabaab, Horumarinada iyo Taakuleynta ciidamada.
Haddalka Rex Tillerson, ayaa kusoo beegmaaya xili dhawaan Madaxweynaha Mareykanka Trump uu sheegay in Somalia ay saari doonaan awooda ugu badan ee argagixisa la dagaalanka.
The post Muxuu ku saleysnaa kulanka Farmaajo iyo Rex Tillerson ee khadka teleefanka? appeared first on Ilwareed Online.